Ithegi: Imeyile ye-Yahoo (i-Desktop) | Martech Zone
Ithegi: Imeyile ye-Yahoo (kwiDesktop)
Besigxile… er… ukukhala malunga neselfowuni mva kwaye ndiyathemba ukuba siya kuyifumana. Ukuba wenza into enye namhlanje, kufanele ukuba kukuvavanya imiyalezo yakho ye-imeyile oyithumelayo kumthengisi wakho we-imeyile ukubona ukuba abantu banokuzifunda ngokwenene. Njengoko siphuhlise iitemplate zeimeyile ezisisiseko ze-imeyile yethu yesisombululo seWordPress, i-CircuPress, ukwakha itemplate ye-imeyile ephendulayo eyenze ubungakanani kwakhona, yafundeka, kwaye yasebenza kuyo yonke indawo
NgoMgqibelo, ngoJuni 18, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kule veki, ndinamava amangalisayo okususa isisombululo sevidiyo esikwi-Vee24 kwi-intanethi. Inkampani ibijikeleze iminyaka embalwa ifezekisa indibaniselwano yesoftware kunye nesoftware njengesisombululo senkonzo efikelelekayo ngokumangalisayo. Oko iVee24 ikwenzileyo akukho nto imangalisayo. Xa umthengi ekusayinela u, baqala bathenge i-Hardware, ebandakanya inqaba enekhamera yevidiyo, ukukhanya kwangaphambili, ukubeka esweni ukusasaza kunye nomoya